“Kudai wakanga wakaita sehanzvadzi yangu” (1)
Hanzvadzi dzemusikana (5a)
‘Ndiani uyo akazembera mudiwa wake?’
“Rudo rune simba serufu” (6)
Hanzvadzi dzemusikana (8, 9)
‘Kana ari rusvingo, . . . asi kana ari suo, . . . ’ (9)
“Ndiri rusvingo” (10)
‘Regai ndinzwe inzwi rako’
8 “Kudai wakanga wakaita sehanzvadzi yangu,Yakayamwa mazamu aamai vangu! Kudai ndaizokuwana panze, ndaikutsvoda,+Uye hapana aindishora. 2 Ndaikutungamirira;Ndopinda newe mumba maamai vangu,+Ivo vakandidzidzisa. Ndokupa waini yakaiswa zvinonhuhwirira kuti unwe,Iwo muto uchangobva kusvinwa wemapomegraneti.* 3 Ruoko rwake rweruboshwe runenge ruri pasi pemusoro wangu,Uye ruoko rwake rwerudyi rwakandimbundira.+ 4 Ndinoita kuti mupike, imi vanasikana veJerusarema: Musaedza kumutsa rudo mukati mangu kusvikira rwava kuda.”+ 5 “Ndiani uyo ari kubva kurenje,Akazembera mudiwa wake?” “Ndakakumutsa pasi pemuapuro. Amai vako vairwadziwa nekukusununguka vari ipapo. Vaya vakakubereka vairwadziwa vachisununguka vari ipapo. 6 Ndiise pamwoyo wako sechidhindo,*Sechidhindo paruoko rwako,Nekuti rudo rune simba serufu,+Uye kuzvipira kwakazara hakudzokeri shure seGuva risingadzokeri* shure. Marimi arwo moto unobvira, iro rimi remoto raJah.*+ 7 Mvura ine masaisai haigoni kudzima rudo,+Uye nzizi hadzigoni kurukukura.+ Kana munhu akapa pfuma yake yese kuti awane rudo,Zvingatoshorwa* chaizvo.” 8 “Tine hanzvadzi diki,+Isati yava nemazamu. Tichaitireiko hanzvadzi yeduMusi waichabvunzirwa?” 9 “Kana iri rusvingo,Tichavaka shongwe yesirivha pamusoro payo,Asi kana iri suo,Tichaivhara nepuranga remusidhari.” 10 “Ndiri rusvingo,Uye mazamu angu akaita seshongwe. Saka ava kundionaSeuya anowana rugare. 11 Soromoni aiva nemunda wemizambiringa+ muBhaari-hamoni. Akaisa munda wacho wemizambiringa mumaoko evachengeti. Mumwe nemumwe aiunza masirivha chiuru ezvibereko zvawo. 12 Ndine munda wangu pachangu wemizambiringa. Masirivha chiuru ndeako,* iwe Soromoni,Uye mazana maviri ndeevanochengeta michero yawo.” 13 “Imi munogara muminda,+Shamwari dziri kuda kunzwa inzwi renyu. Regai ndirinzwe.”+ 14 “Kurumidza, mudiwa wangu,Umhanye semhara+Kana kuti senondo dikiPamakomo ezvinonhuhwirira.”
^ Pomegraneti muchero wakada kuita mutsvuku uye unoratidzika seapuro. Vamwe vanouti chibage cheChirungu.
^ Kana kuti “sechisimbiso.”
^ Kana kuti “seSheori isingadzokeri.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “iwo murazvo waJah.” Jah kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Angatoshorwa.”
^ ChiHeb., “Chiuru ndechako.”